Product Authentication | Gluta Colla
QR Product Authentication Complete!
In order to verify the product and participate in Lucky Draw program, please enter the unique serial number of Gluta Colla product along with personal contact info in the following section.
Serial No. can be found in every authentic Gluta Colla product found asascratch code. There will be one lucky draw ticket for every correct serial no. Customers are advised to keep the codes so as to claim the rewards.
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมในโปรแกรมจับสลากโปรดป้อนหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ Gluta Colla ที่ไม่ซ้ำพร้อมกับข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลในส่วนต่อไปนี้ หมายเลขซีเรียลสามารถพบได้ในทุกผลิตภัณฑ์ Gluta Colla ของแท้เป็นรหัสรอยขีดข่วน จะมีตั๋วจับรางวัลหนึ่งใบสำหรับทุกหมายเลขที่ถูกต้อง ลูกค้าควรเก็บรหัสไว้เพื่อรับรางวัล
Gluta Colla ပစ္စည်း အရည်အသွေး စစ်မှန်မှုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် အောက်ပါ အပိုင်းတွင် ပစ္စည်း၏ Serial နံပါတ်နှင့် အတူ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် နေရပ်မြို့ တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ထည့်၍ ပေးပို့လိုက်ပါ။
Serial နံပါတ်ကို Gluta Colla ထုတ်ကုန်တိုင်းတွင် ခဲခြစ်၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းစစ်မှန်သော Gluta Colla ၏ Serial နံပါတ်မှန် တစ်ခုလျှင် ကံစမ်းမဲ တစ်စောင်ရရှိသွားပါမည်။ ကံထူးဆုများ ရယူရန် ခဲခြစ် နံပါတ်လေးများကို သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
City / เมือง / မြို့